Mainini vakafongora ndokuisa bhurungwa paside ndichibva ndaibairira nyoro pashebeen! - Nhau Dzevakuru
Mainini vakafongora ndokubvisa bhurungwa ndichibva ndaibairira nyoro pashebeen! Munoziva nyaya dzekunwira doro pashabeen dzinoparira, ndini uyo rimwe zuva ndiri kufamba zvangu, homwe was very rich taita mari nengoda, but handizive kuti kamusikana aka kakafemerwa here kuti mudhara akanga ari rich, zvikanzi nhai imi babamukuru munongodya mari yenyu mega mazuva ese sei musingade kundinwisawo kana zve 1 day.
Ndikapindura ndichiti handiti haubatike zvikanzi ndiripo wani ndikati toita sei zvikanzi teverai kwandiri kuenda tisafambe tese coz imimi muri murume we munhu inini ndiri mukadzi wemunhu.
I followed her kumashure ndikaona vachipinda paneimwe imba paive pashabeen ini i didnt know kuti pashabeen, takapinda tikagara hedu pasame sofa tichinwa hedu using same glass panga pane mamwewo madzimai ndini chete ndanga ndiri murume pashabeen apa.
Mainini vakavhura door ndokumuda vachimhanya zvakaita kuti munhu aida kupinda mutoilet avatevere ini ndakazosara ndichibuda but nyaya yanga yazara muraini kuti tawanikidzwa tichisvirana mutoilet ma1.
Previous articleMboro yemurume wangu haigone kunditundisa!
Next articleConfessions of a House Maid Part 1, teasing the Boss while Madam is in the shower